ZUK Z1 Fanadihadiana modely iraisam-pirenena | Androidsis
Famerenana sy famakafakana ny ZUK Z1
Miverina miaraka izahay ny hevitra momba ny terminal Android tsara indrindra, amin'ity tranga ity miaraka amin'ny andrasana ZUK Z1 famerenana sy famakafakana, terminal misy endri-javatra lehibe sy vidiny ambany izay manome be nefa be resaka. Terminal iray azontsika atao amin'ny vidiny 280 euro fotsiny miaraka amin'ny tapakila fihenam-bidy ANTZUKSP de azonao atao ny manavotra amin'ity tranonkala ity ihany. Tranonkala iray mandefa anay ny terminal avy amin'ny trano fitahirizany any Espana izay horaisinay efa tafiditra ao ny vidin'ny fandefasana ho an'ireo marina voalaza etsy ambony 280 euro amin'ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny ary ao anatin'ny telo andro fiasana fotsiny.
Manaraka izany dia manasa anao aho hahafantatra ny fonao amin'ny fonao izay rehetra omen'ity maodely iraisam-pirenena ZUK Z1 ity antsika miaraka amin'ny rafitra fiasa Android 5.1.1 noho ny Cyanogen OS 12.1 mijery ny horonantsary amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity. Tahaka ny tsindrio fotsiny «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity» izay hanazavana ny pitsopitsony rehetra momba azy eo amin'ny lafiny ara-teknika ary koa milaza aminao ny zavatra tsapako momba ny zavatra tsara rehetra atolotry ny ZUK Z1 antsika sy ny zavatra ratsy rehetra na kely kokoa izay hitantsika anio ao amin'ny ZUK Z1.
1 ZUK Z1 International Model teknika famaritana
2 Ny tsara indrindra amin'ny maodely iraisam-pirenena ZUK Z1
3 Ny ratsy indrindra amin'ny maodely iraisam-pirenena ZUK Z1
4 Hevitry ny editor
ZUK Z1 International Model teknika famaritana
modely ZUK Z1
Operating System Android 5.1.1 miaraka amin'ny Cyanogen OS 12.1
efijery 5'5 "IPS LCD miaraka amin'ny FullHD 1920 x 1080 pixel vahaolana ary ny fampiasa amin'ny app 480
processeur Qualcomm Snapdragon 801 Quad core amin'ny 2 Ghz
Tahiry anatiny 64 Gb tsy misy Slot MicroSD
Fakan-tsary aoriana 13 Mpx miaraka amina FlashLED avo roa heny - fanamafisana ny sary ary zahana zoom
Conectividad DualSIM NANOSIM - GSM 850/900/1800 / 1900MHz - WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz - FDD-LTE B1 / B3 / B7 - manohana ny 2G 3G sy 4G LTE - Wifi - Bluetooth 4.1 - GPS sy aGPS misy glosses - USB TypeC 3.0
Fitaovana hafa Mpamaky rantsantanana mampihetsi-po amin'ny bokotra Home - Rafitra miasa Cyanogen OS 12.1 miaraka amin'ny fanohanan'ny fanavaozana ny OTA sy ny fanavaozana ofisialy ny Android 6.0 - Safidy fanamboarana maro noho ny Cyanogen OS - Ny fampiharana Screencast dia natsangana ho fenitra hanaovana horonam-peo na dia tsy mila faka aza ny root Terminus.
bateria Polymer lithium 4100 mAh
lafiny 155'7 x 77'3 x 8'9 mm
vidiny 292 Euro - 280 euro miaraka amin'ny tapakila ANTZUKSP
Ny tsara indrindra amin'ny maodely iraisam-pirenena ZUK Z1
Tsy misy fisalasalana ny tsara indrindra amin'ny maodely iraisam-pirenena ZUK Z1, manala ny vidiny tsy hay tohaina, dia ny fampidirana ho rafitra fiasan'ny Cyanogen OS 12.1, kinova Android Android 5.1.1 Lollipop novaina izay ahafahantsika manamboatra bebe kokoa sy manamboatra ny rafitra fiasa, ary manolotra fanavaozam-baovao ofisialy tsy tapaka ho anay. Inona koa, rehefa mahazo ny ZUK Z1 anao ianao, ny zavatra voalohany hanjavona anao raha vao manomboka ny terminal ianao dia ny fanavaozana vitsivitsy amin'ny OTA.
Betsaka ny zavatra tsara atolotray antsika amin'ity vidiny mahavariana ity izay azoko atao tsara kokoa ny manazava azy ireo aminao toy ny lisitra:
Android 5.1.1 Lollipop miaraka amin'ny Cyanogen OS 12.1 ary azo antoka ny fanavaozana ireo kinova Android vaovao, amin'ity tranga ity, mankany Android 6.0 Marshmallow.
Sarimihetsika 5,5 ational manaitra miaraka amin'ny famaha FullHD ary haavo mamirapiratra mahavariana izay mahatonga antsika hankafy ny kalitaon'ny efijery hatramin'ny farany, na dia mampiasa ny terminal amin'ny tara-pahazavana mivantana aza.
processeur Snapdragon 801 miaraka amin'ny Android 5.1.1 sy RAM 3 GB ho an'ny fampisehoana mahatalanjona na dia mihazakazaka aza lalao na fampiharana mavesatra.
Fahatsiarovana ny 64 Gb fitehirizana anatiny.
Famolavolana tena tsara sy kanto miaraka amin'ny vatan'ny vy.
Bokotra Sensational Home miaraka amin'ny iray amin'ireo sensor farany momba ny rantsan-tànana izay vitako nosedraina manokana.
Safidy fanaingoana maro sy fipetrahana manokana momba ny fiainana manokana.
Fampiharana Screencast mifangaro ho an'ny fandraisam-peo na dia misy feo aza tsy mila miorim-paka amin'ny terminal.
Bateria 4100 mAh miavaka izay manome fahaleovan-tena lehibe ho antsika.
Fakan-tsary miorina tsara
Ny ratsy indrindra amin'ny maodely iraisam-pirenena ZUK Z1
Amin'ny ankapobeny, ny ZUK Z1 dia terminal Android lehibe, na dia mihinana ny terminal Android rehetra aza izy ireo izay ankafizinay ny mamakafaka eto AndroidsisMisy zavatra izay tsy tiantsika na azo vahana amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny OTA, izay amin'ity tranga ity dia mahazo toky isika noho ny fiarahamonina Cyanogen OS lehibe.
Ny olana voalohany tokony homarihina amin'ity maodely iraisam-pirenena ZUK Z1 ity dia ny azy olana amin'ny fifandraisana Wifizaho taorian'ny fanavaozana ny fampiharana izay voarainay tamin'ny OTA. Olana vitsivitsy izay rindrambaiko ihany ary ho voavaha tsy ho ela araka izay notaterina tao amin'ny forum ZUK sy Cyanogen OS miaraka amin'ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA izany dia tokony ho tonga afaka andro vitsivitsy. Ireo olana Wi-Fi ireo dia misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny signal sy ny hafainganan'ny fifandraisany amin'ny Internet rehefa miala amin'ny Router isika.
Etsy ankilany, ny zavatra roa tsy dia tena tiantsika loatra dia ny tsy anisany Slot ho an'ny MicroSD mba hanitarana ny fitadidiana fitahirizana anatiny amin'ny alàlan'ny karatra fahatsiarovana, na dia mino manokana aza aho fa 64 GB ny fitehirizana anatiny dia mihoatra ny ampy; ary ny fampidirana a bateria tsy azo esorina.
Tsy manana ny tarika 800 Mhz izy io
Tsy misy slot ho an'ny MicroSD
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Famerenana sy famakafakana ny ZUK Z1
Famantarana bebe kokoa momba ny Xiaomi Mi5
Call support no Android Wear vaovao nambaran'ny Google